Ramla oo ah gabar Soomaali ah Waxay Iskuulka uga hartay kadib markii lagu foorjeeyay shuluqnimo, haddase waa Feeryahanad caan ah + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Ramla oo ah gabar Soomaali ah Waxay Iskuulka uga hartay kadib markii...
Ramla oo ah gabar Soomaali ah Waxay Iskuulka uga hartay kadib markii lagu foorjeeyay shuluqnimo, haddase waa Feeryahanad caan ah + Sawirro
(London) 09 Maarso 2019 – Ramla Cali waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee ka cararay dalkooda kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya xiliyaddii sagaashamaadkii, kadibna waxay ka mid noqotay kumanaan qaxooti ah oo ka soo jeeda Soomaaliya kuwaas oo aan xitaa aqoonin xiliga saxda oo ay dhasheen.
Ramla iyo qoyskeeda ayaa u soo wareegay Bariga Magaalada London halkaas oo ay ku qaadatay cashiro ku saabsan Feerka waxayna sheegtay in feeryahanimada ay bilowday kadib markii si qasab ah ay uga hartay Iskuulka sababtoo ah aad ayay u buurneed, waxaana nafta looga qaaday Foorjo.
Waxay deeto baratay cilmiga sharciga, iyadoona si aan la ogeyn u qaadanaysay tababar ku saabsan Feerka waayo qoyskeeda kama aysan heysanin fasax. Laakin waxay qarisaba, Ramla ayaa dareentay inuu dhamaaday xiligii ay is qarinasay inay tahay Feerhanad.
Sanadkii 2016-dii waxay noqotay horyaala Feeryahanka Muslimiinta ku nool Ingiriiska gaar ahaan dhanka dumarka.
Kadib Isfahan dhexmaray iyada iyo adeerkeed iyo sidoo kale dadka deegaanka waxay Ramla awood u heshay in qoyskeeda ay taageero ka hesho, waxayna hadda isku diyaarinaysa inay matasho dalkeeda kana qaybgasho tartamada caalamiga ah ee Feerka.
Ramla Cali ayaa sheegtay inay si aad ah ugu faraxsantahay xirfadeeda Feeryahanimo waxayna sidoo kale rajo fiican ka muujisay inay guulo ka gaari karto mustaqbalka dhow. Waxay intaasi ku dartay inay haysato macalimiin wanaagsan kuwaas oo jecel inay mar walba dhiiragaliyaan.
Ramla ayaa tusaale u ah haweenka Muslimiinta ah ee doonaya inay ka qaybgalaan tartanada kala duwan sida orodka iyo sidoo kale ciyaaraha Feerka Miisaanka culus.
Previous articlefaahfaahin ku saabsan dad loo xiray qarax culus oo ka dhex dhacay Gurri ku yaala Muqdisho + Sawirro
Next articleMUSAFANI: – Askarigeena dhaqanka xun ee Dumarka dharbaaxaya waxaa looga baahan yahay Soomaaliya!